Wondershare dr.fone Centre inkxaso
dr.fone toolkit Center inkxaso
Enoba nazo yintoni ingxaki xa usebenzisa dr.fone izixhobo, sihlala apha ukunceda wena zisebenze ngaphandle.
Buyisa Code Registration
Ukuze asincede kunceda ngendlela wakuzila, nceda uphendule le mibuzo 2-3 ilandelayo, kwaye uya kunikhokelela kuyo kwiqela yenkonzo elungileyo. (Support Technical, Inkxaso Customer okanye Sales)
kukunceda njani na?
I unayo eminye imibuzo zobugcisa malunga imveliso ndimzuzile.
Ndinombuzo malunga ikhowudi yobhaliso, ukulanda, ukufakela okanye isebenze imveliso yam.
Ndifuna ukwazi malunga yakho mvume, ukuphuculwa kunye imali nkqubo.
Ndicela nje ukuqalisa kwaye eminye imibuzo.
Ndinemibuzo malunga nemveliso nemisebenzi kunye nemida phambi kokuba uthenge yam.
I sele wenza ukuthenga , kodwa kufuneka imibuzo malunga umyalelo wam .
Mna amacebiso umphathi imveliso leyo.
Ndifuna ukuba ukwabelana ncomo yam kunye nabanye abathengi.
Nceda ukhethe imfuneko yakho ethile ukusuka ngezantsi.
Umbuzo wam malunga nokuphola iifayile ezivela iPhone, iPad kunye iPod wam touch.
I imibuzo ethile malunga nemisebenzi ngemveliso kunye nemida phambi kokuba uthenge yam.
Wondershare Dr, Uphawu for iOS
Umbuzo wam malunga recoverying iifayile ezivela Android Smartphones wam (Samsung, njl.)
Akukho nanye kwezi zingasentla, nceda khetha inkqubo onomdla kuyo
Nceda uthumele imibuzo kwaye ufumane iimpendulo ezivela kwiingcali e PDFelement Community.
Nceda khetha udidi elinye elichaza udaba lwakho.
Ndifuna ukwazi inkqubo isebenza njani ukufumana kwakhona iinkcukacha zam phambi kwam ayithenge.
software yethu ikwazi ukulungisa iOS errros zinjengezo zichazwa. Oku kuthetha ukuba inkqubo yokusebenza ukhandwa (umz wanamathela kwimo recovery okanye Apple logo loop) uze uzise ifowuni emva ubume yesiqhelo yokusebenza. Oku kunokwenziwa ngaphandle echaphazela data yakho. Lo ngumsebenzi eya kusebenza kuphela kwinguqulelo ehlawulwa software yethu, kwaye akukho siqinisekiso sokuba kuya kusebenza.
Awesome, ingxaki isonjululwe! Ndidinga uncedo ngqo. Qalela ekuqaleni
Siyixabisile izimvo abathengi bethu, kwaye samkela ukuba usixelele ngamava akho kunye Product yakho Wondershare. Sithumelele zakho izimvo, izicelo, okanye izimvo. Nangona singakwazi ukuphendula ngqo impendulo yakho, siza kusebenzisa ngayo ukuphucula iimveliso kunye neenkonzo zethu. Ukuba unawo imeko yobugcisa okanye inkxaso, koko kucelwa uqhagamshelane nathi ngokusebenzisa inkxaso yethu Centre, njengokuba siza kuba nako ukuphendula ngoncedo
Iingcebiso okanye iimfuno ye program
A kunconywa ngale mveliso
Ngokwenene kakhulu izimvo kunye neengcebiso zakho iimveliso zethu. Ingxelo yakho iya kuthunyelwa iqela lethu yophuhliso ngokutsha ukuze ubone ukuba ifakwe ku okuzayo. Nangona singenzanga ukuphendula yangasemva, siyazi ukuba siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze enze imveliso ilungileyo ukuba sinako, yaye impendulo yakho kuya kusinceda kakhulu.
Ukuba udinga uncedo enye kwiimveliso zethu, qhagamshelana iqela lethu inkxaso Inkxaso yethu Centre.
Enkosi ngexesha lakho, nokuxhasa!
(Ubuninzi bobungakanani befayile upload: 60 MB)
Pay Indlela PayPal Ikhadi letyala
operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Ingwe) 10.4 (Tiger) 10.11 (Captain) 10.12 (Sierra) Okunye
Version Product Windows (7.0.2) Windows (7.1.0) Windows (7.2.0) Windows (7.3.0) Mac (6.1.0) Mac (6.9.0) Mac (7.0.0) Okunye
operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.11 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Lion) 10.7 (Lion) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Ingwe) 10.4 (Tiger) 10.11 (Captain) 10.12 (Sierra) Okunye
Android Recovery Data Android SD Card Recovery Data Android lokubuyisa Aluphumelelanga Data screen Android Lock Screen Ukususwa
Imeyile le sisombululo
Nika inkcazelo eceliweyo yaye siza ukuxhumana nomnye arhente zethu zenkxaso.